Cameroon - Zuva reVechiduku: vadzidzi vanobva kuMadokero nekuSouth West vanofambisa kuFuil (North) - TELES RELAY
HOME » kambani »Cameroon - Youth Festival: vadzidzi vanobva kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero uye kumaodzanyemba kwakadziva kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kuFuilu (North)
Cameroon - Youth Festival: vadzidzi vanobva kuMadokero uye kumaodzanyemba kwakadziva kumaodzanyemba kumadokero kuFuilu (North)
Chirongwa cheNational Youth Day chakarongwa mudunhu reFiuil chakabvumirwa kunzwisisa kukosha kwezvikoro uye tarenda yevana munharaunda iyi yenyika.
"Kuedza kwekutanga, inoridzirwa shamhu! Wakafadzwa kukereke yose yegadziriro yegadziriro iri muruwa rwaFuuil! " Henri Nicolas Owono Mbarga akaratidza kugutsikana kwake pakuguma kwegadziriro yemutambo wevechidiki musi weMuvhuro muFuilu. Kuonga kubatanidzwa kukuru kwevadzidzi, vadzidzi kubva kumadzidzisiro evanhu uye vechiduku, vanhu vakaungana pahofisi yefeste de Figuil vakawana kubwinya kwepachikoro chechikoro cheruwa. Vachirudzirwa nerudo rwemunharaunda yavo, vana vakamira pamberi pevakuru vakuru uye vakakokwa kuti vapemberere.
Pakuedza kwekutanga, inoridzirwa shamhu! Iyi tsika ichave ichiremekedzwa pamusoro pekutonga uye zvisikwa zvakatarwa. Mhomho dzakawanda dzinouya kubva munzvimbo dzakasiyana-siyana dzakanzwisisa hutano uye kufarira kwevatambi. Zvipfeko zvakakodzera, nziyo dzokuda nyika, nhumbi dzemagetsi, mharidzo inotyisa ndeyezvinhu zvose zvezvipo zvinowanikwa nevanhu.
"Kutaura nezvezvinhu zvitsva zvataive nazvo. Inguva yakareba kubvira apo hurumende dzakawanda dzainge dzanyangarika kubva pachirongwa. Takatora dambudziko rekudzokorora izvi mumusangano weiyi 53 e edition uye vanhu vakuru vanokoshesa, "inotsanangura mutauri wesangano revechidiki uye dzidzo yehupfumi yeChiuil.
Chinhu chitsva mumamiriro ezvinhu akakomba muCameroon, vechiduku vanobva muruwa rwaFuuil vakagamuchira mapuranga kubva kuvane masimba. Uyezve, vadzidzi vanobva kuNorth West neSouth West avo vakasarudzwa nekuda kwekubatana kwavo vakabatsirwa nekutsigirwa kwaMambo weNyika uye vatungamiri vezvikwata zveFuil in Northern Northern region.
Henri Nicolas Mbarga Owono, Sub-mutariri wedunhu, guta titeme nyika angataura kukura sezvo dzidzo yevana haina nechokwadi, "vanhu ainditsigira kupingudza dzimba Figuil kirasi uye Sub-Prefecture uye yakagara Sub-wevarume. Ndiri kugutsikana nokuti vanhu Figuil vakanzwisisa chii zviremera anotarisira decentralization, "musoro nyika venhau.
Nezviito izvi, hutungamiri hwehutungamiri hunoita kuti hubatane nekusimudzira dzidzo. Chiito chinokuyeuchidza vanhu vesuwa reTuuil kudiwa kwekushingaira kubatanidzwa mumabasa ekufambisa mune zvayo zvose. Muchiito ichi, anoratidzawo nzira yekugadzirisa hurumende, iyo inosimbisa kubatanidzwa kwevanhu mukutarisira kwezvakaitika.
Par Fondix Swaboka in Garoua | Actucameroun.com
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://actucameroun.com/2019/02/12/cameroun-fete-de-la-jeunesse-des-eleves-originaires-du-nord-ouest-et-du-sud-ouest-defilent-a-figuil-nord/
Gbagbo akatongwa: Emmanuel Altit naJean Paul Paul Benoit, makore masere edzimhosva dzemagweta muThe Hague - JeuneAfrique.com
Jennifer Yéo akakurudzira kumusangano wekutanga uye nhengo ye Rotary yakashanda
VANHU & VANHU16,302
Zvepabonde uye hukama96